प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल आइसियुमा - Muldhar Post
प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल आइसियुमा
पत्रपत्रिकाट २०७५, ८ माघ मंगलवार 331 पटक हेरिएको
नेपाल कम्प्युनिष्ट पाटी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल दुई दिनदेखि सुमेरु अस्पताल भर्ना भएकी छन्। रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि धापाखेलको उनलाई आइतबार बिहान सुमेरु अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। ‘उहाँलाई रुघाखोकी फ्लु देखियो,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ।’ सीताको उपचारमा डा. युवराज शर्मालगायत चिकित्सक टोली खटिएका छन्।
उनी लामो समयदेखि वंशानुगत पार्किन्सन रोगका कारण पनि पीडित थिइन्। चिकित्सकका अनुसार यस्ता बिरामीको गति सुस्त हुने, हातखुट्टा कमजोर हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन्। सीतालाई प्रेसर र सुगरको समेत समस्या छ। अन्नपूर्ण पोष्टको अनलान सेवाबाट ।
त्यस्तै – यी गल्ती जसले असर गरिरहेकाे छ तपाईंकाे मष्तिस्कलाई
एक दिनभरमा तपार्इँ अाफ्नाे दिमागलार्इ असर पर्ने कति गल्तीहरू गर्नुहुन्छ हाेला ? हुन त मानिसले जीवनमा धेरै गल्ती गर्छ । भनिन्छ गल्ती नगर्ने मानिस नै हुँदैन । गल्ती सामान्य मानिसले मात्र होइन बुद्धिमान तथा मेहेनती मानिसले पनि गर्छन् । तर तपार्इँका गल्तीले अाफ्नाे दिमागमा कतिकाे असर गरिरहेकाे छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । तपार्इँलार्इ सामान्य लाग्ने अानीबानीले पनि तपार्इँकाे दिमागलार्इ असर पुर्याइरहेकाे हुन्छ । हामीले दिनभरीमा धेरै यस्ता गल्तिहरु गर्छाैँ जसको कारण हाम्रो दिमागमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा मेमोरी पावर कमजोर भएर मस्तिष्कमा असर पर्ने समस्या अाउनसक्छ ।
दिमागले सही तरिकाबाट काम गर्न सक्दैन । न्यूरोलोजिस्ट डाक्टर प्रनव कुमार भन्छन् यदि यी गल्तिहरुलाई समयमा नै सुधार ल्याउन सकियो भने दिमागलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ । डाक्टर प्रनवका अनुसार दिमागलाई असर गर्ने हाम्रा ५ आनीबानीहरु यस्ता छन् ।
१. कम्तिमा पनि ७ घण्टा सुतेन भने मस्तिष्कले ठिक सँग काम गर्दैन । समय सँगसँगै उसको काम गर्ने क्षमतामा पनि कमी आउँछ । हाम्रो मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्छ ।
२. धेरै समयसम्म एक्लै बस्ने मानिसहरुमा अल्जाइमरको जोखिम बढ्छ । यसले मस्तिष्कमा नराम्रो असर पार्छ ।
३. जङ्क फुडमा एमएसजी नामक एडिटिव मिसाइएको हुन्छ । जुन मस्तिष्कको न्यूरान रिसेप्टर्सका लागि घातक हुन्छ । धेरै मात्रामा जङ्क खाना खानाले टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने र बान्ता हुने जस्ता समस्या हुन सक्छ ।
४. लगातार धेरै समयसम्म हेडफोन वा एरफोनमा ठूलो आवाजमा गीत सुन्नाले मष्तिस्कमा नराम्रो असर पार्छ ।
५. धुमपान गर्दा हाम्रो शरीरमा केही हानिकारक केमिकलहरु प्रसारण हुन्छ । यसले रगतलाई गाढा बनाइदिन्छ र मस्तिष्कमा रगत प्रसारण कम हुन्छ । रगत सञ्चालनमा अवरोध आउँदा समग्र स्वास्थ्य अवस्थामा नै प्रभाव पर्छ ।